पुननिर्माणको बजेट नआउँदा भवन अलपत्र::Online News Portal from State No. 4
पुननिर्माणको बजेट नआउँदा भवन अलपत्र
बागलुङ, २३ असार – गणतन्त्र प्राप्तीपछि स्थापित शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्रालयले सशष्त्र द्वन्द्वमा ध्वस्त भएका भवनहरुको पुननिर्माणको काम गर्दै आएको छ । यो अभियानमा बिशेषगरी तत्कालिन गाविस भवन र बिद्यालय उसको प्राथमिकतामा पथ्र्यो । तर यहाँ निर्माणाधिन भवन मन्त्रालयको बजेटकै अभावमा अलपत्र परेको छ । झण्डै चार बर्षअघि शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्रालयको लगानीमा निर्माणाधिन रायडाँडाको तत्कालिन गाविस भवन अहिले अलपत्र छ । हाल यो गाउँ बागलुङ नगरपालिकाको वडा नं. ११ पर्छ । चार कोठे भवनको डिपिसी गरिएको जग भने बजेट आउन छाडेपछि अलपत्र भएको हो । यो भवन बनेमा वडा कार्यालय राख्न मिल्ने प्रकारको छ । वडा कार्यालय भने भवन अभावमा जीर्ण भवनमा संचालित छ । मन्त्रालयले बहुबर्षे योजनामा राखेर क्रमागत बजेटमार्फत निर्माण गर्ने लक्ष राखेको थियो । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि भने यो भवनका लागि बजेट आउन छाडेको छ । दुई बर्षदेखि बजेट निकासा नभएपछि यो भवन अलपत्रै परेको हो ।
मन्त्रालयले तत्कालिन जिल्ला बिकास समितिमार्फत बजेट पठाएर निर्माण थालेको थियो । जिविसको भूमिका फेरिएर समन्वय बनेपछि त्यो बजेट आउन छाडेको वडा अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र गौतमले बताए । ‘चालु बर्षपनि समन्वयमा ४ करोड रुपैयाँ बजेट थियो, त्यो अन्य पूर्वाधारको मर्मत र पुननिर्माणमा लगायो’ गौतमले भने, ‘त्यसबाट पाउन सकेको भएपनि बनाइन्थ्यो ।’ नगरपालिकाले पनि उक्त भवनको अपनत्व लिएको छैन । भवन अलपत्र परिरहेकै बेला वडा कार्यालय भने जीर्ण भवनमा बसेको छ । भवन बनाउने बजेट नभएपछि छाप्रोमा भाडा तिरेर बस्नु परेको हो । शान्ति मन्त्रालयले यसअघि भकुण्डे, सिगाना लगायतका स्थानमा भने भवन बनाएको थियो । ती भवन वडा कार्यालय बसेका छन् । वडा नं. ९ को तित्याङमा पनि भवन अभाव छ । अलपत्र संरचना छाडेर अर्को भवन बनाउने वा त्यही भवन नगरको स्वामित्वमा ल्याएर जाने भन्ने बिषयको जटिलताले काम रोखिएको नगर प्रमुख जनकराज पौडेलले बताए । निर्माणाधिन भवनलाई नगरले स्वामित्वमा लिन सकेमा १५ देखि २० लाख रुपैयाँमै भवन ठडिएर काम चलाउन सकिने गौतम बताउँछन् । ‘२० लाख बजेट भयो भने चार कोठा बनेर वडाको बजेटबाट ट्रस्ट राखेर सभाहल पनि बनाउन सकिन्थ्यो’ नीतिगत समस्या र अन्य जग्गा तथा पूर्वाधार अभावमा वडा कार्यालय जोखिम स्थानमा बसनु परेको उनले गुनासो गरे ।
रायडाँडामै निर्माणाधिन स्वास्थ्य चौकी भवन पनि बनेको एक बर्षदेखि संचालनमा आउन सकेको छैन । निर्माण कम्पनीले काम सकेको बताएको छ । नगरपालिकाले भने गुणस्तर मापनको कामले रोकेको ठेकेदार कम्पनीले बतायो । ‘काम सकेका हौं, हस्तान्तरण भएको छैन’ ठेकेदार प्रकाश आचार्यले भने, ‘गुणस्तर मापनमा पनि राम्रो देखिएको छ, तर बुझ्न नमानेकोले संचालन नभएको हो ।’वडा अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र गौतमले भने भवन निर्माणपछि मैदान सम्याउने शर्त पुरा नभएकोले स्थानीयले पनि नमानेको बताए । भवनको गुणस्तर मापन गरेर उपर्युक्त छ भनेर भवन डिभिजनले प्रतिवेदन नदिएकोले प्राविधिक कारणले बुझ्न नसकेको उनले बताए । भवन हस्तान्तरण नभएकोले स्वास्थ्य चौकी छाप्रोमा संचालित छ । सुरक्षित सुत्केरी सेवा दिने बर्थिङ सेन्टर पनि छाप्रोमा चलाउनु परेको स्वास्थ्यकर्मीले बताए । यो भवन हस्तान्तरण भए नियमित स्वास्थ्य परिक्षणसहित प्रसुती सेवा सुबिधा सम्पन्न स्थानमा गराउन सकिने महिला संजाल रायडाँडाकी अध्यक्ष कुमारी थापाले बताईन् ।